प्रयास गरे असम्भव केही छैन - Nepal Post Daily
बीरगन्जमा मोटरसाईकल चोरीका घटना कुनै नौलो कुरा होइन् । दिनहुँ बीरगन्ज बजारमा मोटरसाइकल चोरीका घटना हुने गरेका छन् । मोटरसाइकल चोरीका घटनाको समाचार स्थानिय पत्रपत्रिकाले प्रकाशित पनि गर्ने गरेका छन् ।
मोटरसाइकल चोरीको इतिहास बीरगन्जमा निकै पुरानो रहेको भएपनि पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ । चोरी हुनु कमजोर शासन प्रशासनको संकेत हो । इतिहास पुरानो भएपनि मोटर साइकल चोरीको घटनालाई प्रहरी प्रशासनले कहिल्यै निरुत्साहित गर्न सकेनन् । देशका ठूला सञ्जाल, गुण्डागर्दी तथा भ्रष्टाचार प्रकरणहरुलाई किनारा लगाएको उदाहरणहरु प्रहरी सँग छ । तर, पर्सा जिल्लामा हुने गरेको तस्करी तथा मोटरसाइकल चोरीको घटनालाई प्रहरीले कहिल्यै रोक्न सकेन ।
जब जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाता बाहिरबाट मोटरसाईकल चोरी हुनसक्छ भने नगरका अन्य भागमा चोरी हुनु अस्वभाविक त बिल्कुलै होईन ।
प्रयास यथेष्ट भए असम्भव केही छैन भन्ने विषय सर्वविदित्तै छ । प्रहरीले भरपूर प्रयास मात्र गर्ने हो भने मन्दिर बाहिरबाट कसैको चप्पल पनि चोरी हुन सक्दैन । तर, प्रयास सही र इमान्दारिताका साथ हुनुपर्छ । बीरगन्जमा हुने गरेको मोटरसाइकल चोरीका घटनामा स्थानिय चोर, लागुऔषध दुव्र्यसनी, मोटर मर्मत हुने ग्यारेज तथा स्वयम् प्रहरी कै पनि संलग्तामा हुने गरेको आम पर्सेली जनताको धारणा छ । तर, प्रहरीले भने अन्य सबै विषयलाई स्विकार गर्दै आएपनि आफ्नो संलग्तालाई नकार्दै आएको छ ।
प्रहरीले पटक पटक मोटर चोरीको गिरोह तथा सञ्जाललाई ध्वस्त पार्न अभियान पनि चलाएको दाबि गर्दै आएको छ । तर, कहाँ चुक्दै छ त प्रहरी ? यस विषयमा प्रहरीले आत्म–मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो एक महिनामा मोटरसाईकल चोरीको घटनाको विवरण हेर्ने हो भने प्रहरीको प्रयास सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रहरीले प्रयास गरे के यस्ता चोरीका घटनालाई निरुत्साहित गर्न सकिदैन ?
पक्कै सक्छ नि । विषय चोरीको मात्र होईन । प्रयासको पनि हो । प्रयास गरे असम्भव केही हुँदैन भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै प्रहरीले कामकारवाही अघि बढाउन आवश्यक छ ।
Previous articleसिद्दी स्मृति अस्पतालको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु
Next articleएनआईसी एसियाको धोबीनी शाखामा चोरी